के मास्कको प्रयोगले शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कमी हुन्छ ? – Sidha Online Post
मुख्य पृष्ठ /News/के मास्कको प्रयोगले शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कमी हुन्छ ?
नियमित सावुनपानीले हात धुने, मास्कको सही प्रयोग, स्यानिटाइजरको प्रयोग, चस्माको प्रयोग, भौतिक दुरी (१ देखि २ मिटरसम्मको) र सरसफाइलगायतले कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट जोखिन सकिनेबारे जनस्वास्थ्य विज्ञ तथा चिकित्सकहरुले बारम्बार बताउँदै आइरहेका छन् । तर पछिल्लो समय मास्कको प्रयोगबारे केही भ्रमपूर्ण कुराहरु पनि बाहिर आएका छन् ।
जस्तोः लामो समय मास्कको प्रयोग गर्दा शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कमी हुने र भविष्यमा अक्सिजनको कमीबाट हुने रोग बढ्ने खतराबारे । यसबारेमा कतिपय विज्ञ भनी मिडियामा प्रस्तुत गरिएका थरिथरिका व्यक्तिहरुको दावीले झनै मास्कका प्रयोगबारे आम जनतामा अन्यौल बढाउने काम गरिरहेको देखिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा हामीले के मास्कको प्रयोगले साँच्चिकै हाम्रो शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कमी हुन्छ हो रु भनेर धरानस्थित विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका इन्टरनल मेडिसिनका डा. अग्रज उप्रेतीसँग सोधेका थियौँ । उनले कोरोनाभाइरसका विरुद्धमा सामाजिक सञ्जालहरुमा जनचेतना जगाउने थुप्रै सामग्रीहरु प्रचार गर्दै आएका छन् ।
हाम्रो जिज्ञासाको प्रत्युत्तरमा डा। उप्रेतीले ‘त्यसमा कुनै सत्यता नभएको’ जानकारी दिएका छन् । ‘कोरोनाभाइरसको महामारी दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको अहिलेको अवस्थामा मास्कको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने यस्ता अफवाहको पछि लाग्नु खतरनाक हुने’ उनको कथन छ । ‘मास्कको प्रयोगले स्वास्थ्यमा हानी पुर्याउँछ भनेर आजसम्म कुनै पनि अनुसन्धानले तथ्य स्थापित नगरेको स्थितिमा त्यस्ता अफवाहको विश्वास गरेर मास्कको प्रयोगबारे भ्रममा नपर्न’ उनको सल्लाह छ ।
आजसम्म मास्कको प्रयोगले स्वास्थ्यमा असर पर्छ भनेर कुनै पनि तथ्याङ्क बाहिर आएको छैन । मास्कको प्रयोग आज आएर मात्रै गरिएको होइन । विगतमा फैलिएका ठूला ठूला महामारीको समयमा पनि मास्कको प्रयोग भएको देखिन्छ । चिकित्सकहरुले पनि उपचारका क्रममा लामो समय मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । अझ शल्यचिकित्सकहरुले त शल्यक्रियाको समयमा घण्टौं मास्क लगाएका हुन्छन् । यसबाट अक्सिजनमा कमी आएको भन्ने कुनैपनि अध्ययन अनुसन्धान बाहिर आएको छैन ।हो, कसैकसैलाई मास्कको प्रयोग सहज नहुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो अनुहारमा मिल्ने र सास फेर्न सहज हुने खालको मास्कको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
सामान्यतया कोरोनाभाइरसको साइज ०.१ माइक्रोमिटर हुन्छ र मास्कमा हुने सानासाना छिद्रा ९प्वाल०को साइज ०।३–५ माइक्रोमिटर हुने भएकाले मास्कले भाइरसलाई पूर्णरुपमा रोक्न सक्छ भन्ने होइन तर यसले नियन्त्रण भने गर्छ । त्यसैले पनि मास्कको प्रयोगलाई स्वास्थ्य संगठनहरुले अनिवार्य रुपमा प्रयोग गर्न भनिरहेका छन् । खोक्दा वा हाँच्छ्यू गर्दा कोरोनाभाइरस एक्लै निस्किदैन त्यो त थुकको छिटाहरुसँगै बाहिर निस्कने हो ।
त्यसप्रक्रियामा निस्कने थुकका छिटाहरु हाम्रो आँखाले देख्दा त स–सानो आकारमा नै निस्किन्छ । तर त्यस्ता छिटाहरुको साइज ५ माइक्रोमिटर भन्दा धेरै ठूलो हुन्छ । त्यस्ता छिटाहरुलाई मास्कले सजिलै रोक्छ । यस अर्थमा पनि अहिलको संक्रमण फैलिइरहेको अवस्थामा मास्क लगाउँदा बेफाइदा होइन फाइदा नै हुन्छ ।
कुनै पनि कुराको फाइदा धेरै र बेफाइदा थोरै छ भने किन प्रयोग नगर्ने रु मास्कको हकमा पनि त्यही कुरा सत्य हो । मास्कले बाहिरी संक्रमणबाट मात्रै रोक्दैन, बरु मास्क लगाएका व्यक्ति स्वयं संक्रमित छन् भने पनि ऊबाट अरुमा संक्रमण सार्ने सम्भावनालाई न्यून पारिदिन्छ । अहिलेसम्मको विज्ञानले सिद्ध गरेको तथ्य के हो भने मास्कको सही प्रयोगले संक्रमणको जोखिमबाट बच्न सकिन्छ ।
घरभित्र बसेको अवस्थामा मास्क लगाउन जरुरी छैन । तर ठूलो परिवार र संक्रमणको जोखिम छ भने दुरी कायम गर्ने र सम्भव भएको समय मास्क लगाउनुपर्छ । त्यसैगरी, घरबाहिर निस्किँदा भने अनिवार्य मास्क लगाउने । तपाईं कसैको सम्पर्कमा जादै हुनुहुन्छ भने मास्क लगाएर नै कुराकानी गर्नुहोस् । तपाई कार्यालय जाँदै हुनुहुन्छ र कार्यालयमा तपाईंको क्याविन छ भने कार्यालय समयमा मास्क नलगाई बस्न सकिन्छ तर तपाईसँग अरु सहकर्मी छन् भने मास्क लगाउनुपर्छ । बाटोमा हिँड्दा पनि अरु मानिस छैन भनेर मास्क खोल्ने वा चिउडोमा मास्क लगाएर हिँड्ने काम विलकुलै नगरौं यो निकै घातक हुन सक्छ ।
कस्तो मास्क लगाउने ?
सामान्यतया मास्क कस्तो लगाउने भन्नेबारे अन्यौलता देखिएको छ । कस्तो मास्कको प्रयोग गर्ने र कतिवेला गर्नेबारे भने आमनागरिक जानकार हुनुपर्छ । सामान्यतया सर्वसाधारणले सर्जिकल फेस मास्कको प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ । सवैले हरेक दिन एन९५ मास्कको प्रयोग गर्न नसक्ने भएकाले सर्जिकल मास्क प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ । सर्जिकल मास्क एकपटक प्रयोग गरेपछि विसर्जन गरिहाल्नु पर्छ । हरेक पटक मास्क फेर्न नसकेको अवस्थामा वा खरिद गर्न नसक्दा भने तिनपत्रे कटनको मास्क भए पनि प्रयोग गर्नुपर्छ ।
दैनिक सर्जिकल मास्कको प्रयोग गर्न नसक्नेले आफूसँग भएको कटनको कपडाबाट तीनपत्रे मास्क बनाएर लगाउने तथा सल, स्कार्फले भएपनि पूरा नाकमुख ढाकेर हिँड्दा भाइरस संक्रमणबाट केही हदसम्म भएपनि बँच्न र अरुलाई बचाउन सकिन्छ । आज, व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि भरपर्दो साधनका रुपमा मास्कलाई विश्वले लिइरहेको बेला हामी भ्रमको पछि नलागौं । सकेसम्म सर्जिकल मास्कको प्रयोग गरौं सकिदैन भने सल, स्कार्फ वा तीनपत्रे कटनको मास्क लगाऔं ।
अर्को भनेको एन ९५ मास्क हो । एन९५ मास्कले ९५ प्रतिशतसम्म बहिरी किटाणु रोक्न सक्ने क्षमता राख्ने बताइएको छ ।
एन-५ दुई किसिमको हुन्छ । एउटा भल्भ भएको र अर्को नभएको । भल्ववाला मास्क संक्रमित व्यक्तिले लगाउँदा अर्कोमा सजिलै संक्रमण सर्ने खतरा हुन्छ भने लगाउने व्यक्तिलाई भने बाहिरी किटाणुबाट जोगाउन सक्छ । महामारीको समयमा कसलाई संक्रमण छ र कसलाई छैन भन्ने नै थाहा नहुने भएकाले भल्व भएको एन९५ मास्को प्रयोगलाई उचित मानिँदैन ।
हामी बाहिरी कन्ट्याकमा रहेको बेला मास्कको बाहिरी भागमा किटाणु टाँसिएको हुन सक्छ र आफ्नो नाकमुखबाट निस्किएका वाफ र छिटा पनि त्यहाँ रहेको हुनसक्छ । त्यसैले यो मास्क दैनिक एउटै प्रयोग गर्नु लाभदायक हुँदैन । र, यसलाई पानीले धुनु पनि हुँदैन । धुँदा मास्कका छिद्र बिग्रने र किटाणु सजिलै प्रवेश गर्न सक्छ । एन९५ मास्कलाई एकदिन प्रयोग गरेपछि राम्रोसँग हावा पास हुने स्थानमा झुण्डाएर राख्ने गर्नुपर्छ । सामान्यतः मास्कमा भाइरस टाँसिएकै छ भने पनि ७२ घण्टापछि त्यो स्वतः निश्क्रिय हुने भएकाले यसलाई पुनः प्रयोग गर्न भने सकिन्छ ।